Tanora Kyrgyzstana ‘Manohitra Ny Rehetra’ Ny Omalin’ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2015 12:55 GMT
Nanatanteraka fifidianana tena sarotra vinavinaina i Kyrgyzstan tamin'ny 4 Oktobra, dingana goavana eo anivon'i Azia Afovoany, Sovietika taloha izany. Fa tsy ny zavatra mahataitaitra ireo mpanara-maso avy any ivelany akory dia haharototra ny ankamaroan'ny Kyrgyzstana, indrindra fa ny tanora, izay mahatsapa fa adalain'ny fampanantenana politika poakaty sy ny kolikoly maharitra.
Araka ny tatitra nataon'ny Eurasianet tamin'ny volana Jona :
Ankehitriny dia toa azony antoka fa very ny toerany taorian'ny nifidianan'ny Filankevitry ny Mpitsara (karazana filankevi-pitantanan'ny mpitsara) manontolo tamin'ny 18 Jona mba handroahana azy, isan'izany ny fanitsakitsahana ny fitsipi-pifehezana mifehy ny fitsarana.
Farany teo, tsy navelan'ny vaomiera foibe momba ny fifidianana hiteny maimaim-poana tamin'ny haino aman-jery, toy izay omena ireo antoko politika mifaninana amin'ny fifidianana, ny vondron'ireo mpikatroka misolo tena ny “manohitra ny rehetra”.
Fa nasehon'ny fangalàna ny hevitry ny olona tamin'ny aterineto nataon'ny Zanoza.kg fa maherin'ny ampahefatry ny olona nanontaniana no te-handratsaka ny vatony amin'io fomba io, latsaka kely fotsiny amin'ny vaton'ny antoko Respublika-Ata-Jurt izay mitarika amin'ny fangalàna hevitra.